Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu ku cusbooneysiin karaa naqshadeynta shaashad ballaaran | Wararka IPhone
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu cusbooneysiin karaa naqshaddiisa shaashad ballaaran
Tan iyo markii ay Apple soo saartay Apple Watch bishii Oktoobar 2014, oo ah qalab suuqa ku dhacay bishii Maarso 2015, Apple waxay sii deysay saddex fac oo ka mid ah qalabkan, dhammaantoodna leh qaab isku mid ah. Markay soo dhowaato cusboonaysiinta sanadlaha ah, inbadan ayaa ah falanqeeyayaasha taas xaqiijinaya qaabka soo socdaa wuxuu yeelan doonaa naqshad cusub.
Mar labaad, falanqeeyayaashu waa inay shaqeeyaan si ay u xaqiijiyaan in Apple Watch Series 4 uu ugu dambeyntii bilaabi doono naqshad cusub, oo leh shaashad ballaaran, sidaas awgeedna loo yareeyo muraayadaha dhinaca qalabka. Sida laga soo xigtay Ming-Chi Kuo, Falanqeeye ka tirsan KGI Securities, shaashadda ayaa 15% ka weynaan doonta qaabka hadda socda.
Kuo ma cadeynayso in cabirka aaladda la kordhin doono ama hadii caksigeeda ay tahay, shirkada Cupertino ee fadhigeedu yahay ayaa kaliya balaarineysa shaashadda iyadoo la dhimayo looxyada, looxyada hadii aan eegno aad u ballaaran. Laakiin waxay umuuqataa inaysan noqon doonin ciwaanka kaliya ee jiilka afraad ee Apple Watch, maadaama sida uu sheegay isla falanqeeyaha, ay sidoo kale la midoobi doonto hagaajinta la socodka wadnaha. Hadda, iyo haddii Apple ay raacdo dhaqan, Waa inaan sugnaa ilaa Sebtember iyadoo laga faa’iideysanayo qaabka loo soo bandhigayo saddexda iPhone ee cusub ee loo malaynayo in Apple ay bilaabi doonto sannadkan.
Haddii ay dhacdo in cabirka weyn ee shaashadda la xaqiijiyo, waa macquul Apple ma beddeli doonto farsamada ama cabbirka ay isticmaalaan suumanka illaa iyo haddaIn kasta oo Apple ahaato waxay tahay, layaabi maayo haddii ay sameyso tallaabo la mid ah inay nagu qasbeyso inaan beddelno dhammaan isku xirnaanta xarig ee aan maanta yeelan karno.
Kahor intaadan i weydiinin faallooyinka taas oo ah suunka sawirka kore Hore ayaan uga faalloodaa. Suunka sawirka kore wuxuu ka yimid soosaaraha Juuk iyo gudaha Wararka IPhone waxaan sameynay dib u eegisyo kala duwan moodooyinka qaar
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu cusbooneysiin karaa naqshaddiisa shaashad ballaaran
Ardayda waxay heli doonaan 200GB oo bilaash ah iCloud dhowaan
Logitech Crayon cusub wuxuu kaliya la jaan qaadayaa jiilka 6aad ee iPad